Faa'iidooyinka lensarada Alcon | LIFE PICKER - 2018
Faa'iidooyinka Alcon ee lensarada la xidhiidha
Faa'iidooyinka muraayadaha indhaha
Intaa waxaa dheer, xirmooyinka lens-gu waxay leeyihiin faa'iidooyinka soo socda:
Alcon - damaanad qaadka ugu sarreeya
Shirkado badan oo waqtigayaga joogaan waxay ku hawlan yihiin soo saarida muraayadaha qumman ee tayo sare leh, laakiin dhammaantood ma dhicin qiimo ku filan qiimaha. Shirkadda Alcon waa shirkad heer sare ah oo soo saarta qalabka casriga ah ee qalabka isha lagu hayo ee lagu hagaajinayo muuqaalka muuqaalka. Bogga internetka ee dukaankeenna internetka waxaad ka heli doontaa noocyada ugu ballaaran ee muraayadaha indhaha ah ee dhadhanka oo dhan - oo ay ku jiraan muraayadaha xidhiidhka tayada leh ee ka yimaada soo saaraha Alcon. Qalabka fudfudud ayaa loo damaanad-qaadayaa si loo saxo aragtidaada oo kuu oggolaado inaad indhaha cusub u eegto adduunka. Si degdeg ah u baro si aad u ogaato noocyada kala duwan ee qaybta qaybteeda dukaanka online-ka ah (), oo ha ilaawin inaad booqato qaybaha kale ee goobta. Waxaan rajeyneynaa codsiyadaada - si dhakhso ah ula xiriir annaga sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, si aad u dalbato codsi wareejin ah oo amar ah oo ku yaal Moscow ama gaadiidka meel kale. Waxaan rajeyneynaa wicitaan ama email.
Si ka duwan sida muraayadaha iyo qalabka kale ee farsamoyaqsiga qalabka muraayadaha, muraayadaha gacmeedyada dabiiciga ah waxay bixiyaan hagaajin aragti muuqaal ah. Marka hore, masaafada udhaxaysa dusha sare ee muraayadda ayaa ah mid aad u yar, taas oo hagaajineysa sifooyinka muuqaalka ee aragtida aragtida. Marka labaad, muraayadaha ayaa had iyo jeer ku jira masaafo isla muraayada ah, si aysan u dhicin mar labaad oo aysan bedelin qaabkeeda si ay ugu dhejiso sawirka raajada. Ugu dambeyntii, muraayadaha muraayadda badanaaba waa la sumeeyaa, taas oo aan sawirin kaliya sawirka, laakiin waxay sidoo kale waxyeeleysaa aragga. Marka la eego, isticmaalka muraayadaha indhuhu waxay u oggolaanayaan sanado badan inay ku hayaan aragtida - haddii aysan ku habboonayn, markaa ugu yaraan xaalad joogto ah.
Heerka ugu sarreeya ee raaxada. Xiriirrada muraayadaha indhuhu waxay ku raaxaystaan ​​inay xirtaan oo xirtaan xitaa (sida ugu dhaqsaha badan indhaha iyo gacmaha oo loo isticmaalo habka maalinlaha ah). Inkasta oo raaxo darradu ay yartahay daqiiqadaha ugu horeeya ee xiran, markaa lintiga ayaa dareema wax ka yar muraayadaha caadiga ee qaabka. Intaa waxaa dheer, in qulqulka waxaad si xor ah u deyn kartaa biyaha, ciyaarta qoob-ka-ciyaarka, iyo si firfircoon waqti wakhti la qaataa saaxiibo. Sidaa daraadeed, xirmooyinka laysku xiro ha ka fogaan qol diirran xilliga jiilaalka, sida muraayadaha;
Saameynta xiiqda. Suuqa casriga ah waxaa laga heli karaa noocyada ugu ballaaran ee qalabyada la-talin-la'aanta ah ee qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka. Waxaad iibsan kartaa mashiinka masraxa ama muraayadaha dhejiska ah, ama waxaad si fudud u bedeli kartaa midabka indhahaaga adoo dooranaya nooc ka mid ah iris-laddaleed. Sidaa awgeed, dad badan oo leh cillado ku jira maaskarada irid ah oo ah aesthetic oo leh muraayad;
Qiimo hooseeya. Dabcan, qof walbaa ma awoodi karo inuu iibsado lenses-hal sano oo sanado badan ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira suuqyo badan oo qiimo jaban oo hadda suuqa - tusaale ahaan, kuwa ka soo jeeda kuwa soo saaraha tayo sare leh. Intaa waxaa dheer, waxaad isticmaali kartaa saddexdii biloodba ama lens-ka bilaash ah - waa mid aad u jaban.
Soo saaraha guryaha ee Alcon sanado badan oo ku hawlan soo saarida iyo iibinta qalabyada la-xidhiidhka, qalabka daryeelka, qalabyada kala duwan iyo tas-hiilaadka kaydinta. Ka mid ah noocyada ugu ballaaran ee alaabooyinka waxaad ka heli kartaa noocyo badan oo kala duwan oo lagu qurxiyo, iyo sidoo kale weelasha iyo xalalka dhadhan kasta. U dhaqso si aad u ogaatid noocyada kala duwan ee hadda - waxaan sugeynaa codsiyadaada waxaana lagu balan qaadayaa in ay bixiyaan qiimaha ugu hooseeya iyo bixinta koodhka degdegga ah.